Etu ị ga-esi mee atụmatụ ọhụrụ Semalt ma jiri ya wee bulie elu na Google
Ọ na- ewe milise sekọnd 50 maka ndị ọrụ iwulite echiche nke weebụsaịtị gị. Ndị ọrụ na-achọ interface dị mfe iji rụọ ọrụ na saịtị ha. Ọ bụ ezie na nke a bụ ezigbo ndụmọdụ maka otu akụkụ nke weebụsaịtị gị, Semalt etinyela nke a n'ọrụ na weebụsaịtị ọhụrụ ha .
Peeji ọhụrụ nke Semalt na-achọ ijikọ ọnụ, uwe ọgbara ọhụrụ na interface dị mfe ọgụgụ. Site na usoro a, Semalt emeela ka ọ dị mfe ịghọta etu ha nwere ike isi mee ka ị ruo na Google kachasị elu.
Nyocha ngwa ngwa nke SEO Terminology
Tupu anyị agaa n'ime isiokwu a, ọ dị mkpa inwe nghọta zuru oke maka ụfọdụ ihe ndị dị mkpa. Blọọgụ anyị nwere nduzi zuru ezu na SEO ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu miri emi na ntọala. Maka akụkọ a, anyị ga-agafe nkọwa ụfọdụ.
SEO kwụ ọtọ maka Nchọpụta Ihe Nchọpụta. Ọ bụ usoro ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị mfe ịchọrọ na ịntanetị.
AutoSEO bụ ngwaahịa Semalt wepụtara nke ahụ bụ maka ndị chọrọ ịbanye na SEO na-etinyeghị nnukwu ego.
FullSEO bụ ụdị AutoSEO dị elu nke na-emesi ike ịrụ ọrụ na Ọkachamara SEO na onye njikwa.
SSL bụ njirimara nchekwa na-eme ka echekwa data ndị ahịa na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Keywords bụ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu akọwapụtara nke ndị mmadụ nwere ike ịchọ mgbe ha na-achọta weebụsaịtị gị.
Ogo ga-egosi ọnọdụ gị, ma ọ bụ isiokwu, pụtara na igwe nchọta.
Okporo ụzọ bụ ọnụọgụ ndị mmadụ na-eleta saịtị gị.
Ghọta webụsaịtị Semalt ọhụrụ
AutoSEO, FullSEO, na SSL ka bụ ngwaahịa nke Semalt na-eji iji kwado saịtị gị. Dịka ekwuru na post anyị gara aga na isi okwu a, ndị a bụ ngwaahịa niile a nabatara nke nwere ezigbo ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara ahịrị ngwaahịa, biko lee ọkwa ochie.
Maka blog a, anyị ga na-elekwasị anya n'ịchọpụta ihe ọhụụ na njirisi ihe ntanetị ọhụrụ. Semalt emeela ụfọdụ atụmatụ dị ịtụnanya kwesịrị ịgafe.
Peeji Nchọpụta Nchọpụta Ọwapụta (SERP)
Lelee Peeji Pụrụ Iche
Maka Google Webmasters
Ntụle ọsọ Ọsịsa
Ghọta dashboard Semalt ọhụrụ
Dashboard ọhụrụ ahụ nwere ọtụtụ nzacha ndị dị ike sitere na nke ochie. Ọdịiche dị mkpa sitere na mgbanwe na interface na-emesi ike mkpa nke onye ọrụ ahụ.
Ka ị na-agbada, ị ga-ahụ ọkwa ole isiokwu okwu gị dị na elu 1, 10, 30, na 100. Dashboard a na-eme ka ị mata ihe isiokwu gị kachasị arụ ọrụ bụ. Can nwere ike iji ozi a iji mesie mkpirisi okwu ndị akọwapụtara akọwapụtara.
May nwere ike ịchọpụta na otu mkpụrụokwu enyere aka na iwebata ahịa na-agbanwe agbanwe na ebe nrụọrụ weebụ gị. Dashboard SEO Semalt nwere ike inyere gị aka ịchọpụta isiokwu ndị dị na-eweta ọtụtụ okporo ụzọ. Ejikọtara ya na data na ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa na weebụsaịtị gị, ị nwere ike ịchọpụta na ị na-adọta ụdị okporo ụzọ na-ezighi ezi.
Ingghọta Ihe Nchọpụta Ihe Nchọpụta Ihe (SERP)
Nsonaazụ Nchọpụta Nchọpụta na-enye gị ozi zuru ezu banyere otu ibe weebụ gị si dị n'ọchịchọ. Ọ na - enye gị ozi zuru ezu banyere ihe Keywords na-elu na otu ha si eduga gị na peeji nke gị. Ọ na-enyekwa ozi ahụghị na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ SEO ọzọ: ozi gbasara ndị asọmpi.
Pụrụ ọbụna ikpebi idozi ihe atụ a site na igwe ọchụchọ kachasị mma. Google bụ igwe na-achọ otu na ụwa, mana ọ bụrụ na ịchọta ndị ga - ege gị ntị site na iji Yahoo ma ọ bụ Bing, ị nwere ike ịchọta isi okwu akọwapụtara iji nọrọ n'ọnọdụ dị mma karịa. May nwere ike ịchọ mkpọsa nke na-achọ iti ndị gị asọmpi gafere usoro atọ niile.
Mgbe ị na-atụle SEO, Semalt ghọtara na data bụ ihe niile. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-enyere gị aka ịmepụta ọrụ Google AdWords, mana nke a bụ naanị obere oge. Mgbasa ozi agaghị eme ka nchọta saịtị gị dịkwuo mma n'oge, mana nye gị nkwalite nwa oge nke kwụsịrị iji ego ahụ. Weebụsaịtị e ji SEO rụọ n’uche kpalitere elu nke ibe ndị a ma ga na-echekwa ndozi mgbe niile.
Gịnị bụ Akwụkwọ Pụrụ Iche Pụrụ Iche?
SEO bụ ihe na-achọkarị ka ị bụrụ ihe pụrụ iche mgbe ị na-ahụkarị ka ndị asọmpi gị na-akwanyere isi okwu.
Ndị edemede SEO ọkachamara na Semalt na-amata okwu a site na ịnye gị mkpụrụokwu pụrụ iche nke ga-edozi ma na-enyekwa ndị edemede nwere ike ide ọdịnaya pụrụ iche. SEO bụ nguzozi siri ike, mana Semalt enweelarịrị ndị na-ekwu maka mmeri ya.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị bụ onye edemede ọdịnaya enweghị onwe ya, onye na-abanye azụmahịa ahụ, mana ịchọrọ ntakịrị enyemaka iji mee ka ibe gị wee too. N'okpuru bụ ntakịrị ihe edepụtara na ibe gị nke mpaghara nlele ahụrụ dị na weebụsaịtị weebụsaịtị Semalt ọhụrụ nyochapụrụ.
Ga - achọpụta na enwere isi ihe dị na ya. Mgbe itusịrị ya site na nyocha ọdịnaya, ọ chọpụtala na ngalaba ndị a dị na ọnọdụ ndị ọzọ na weebụ. N'ihi ya, ịpụ iche nke ibe a dị na akara 13 iche diche iche.
Nchọpụta nchọcha nwere ike ịhazi ọdịnaya ma ọ bụrụ na echere na ọ bụ ikikere ma ọ bụ ntụkwasị obi. Otu ụzọ inyocha ihe na-esi ekpebi nke a bụ site na ịdị iche nke ihe ahụ. Ezie na SEO kpebisiri ike ịchọ okwu dị mkpa, nke ọtụtụ saịtị nwere ike ịkekọrịta, weebụsaịtị nke na-enweghị ike iguzo n'etiti igwe mmadụ ahụ ga-aga n'ihu na-enye ọkwa na-adịghị mma.
Semalt bụ ụlọ ọrụ maara nke a. Site na ijikọta nke a na SERP anyị, anyị nwere ike ikpebi nke ọma ma mgbanwe mgbanwe dị mkpa ma ọ bụ na ọ bụghị. May nwere ike iru eru tozuru oke nke 100 n'obere echiche maka nke a. Agbanyeghị, iri ndị kachasị elu ga-achọ azụmahịa gị ka ọdịiche dị na iche na isi okwu dị iche iche n'akụkụ ọdịnaya pụrụ iche.
Ndepụta maka Webmasters Google na Semalt
Dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa, ị nwere ike ịmara na Google nwere ọtụtụ ngwaọrụ maka nyochaa ọrụ. Semalt na-achọ ịgbakwunye arụmọrụ ahụ site na iji otu ndị ọkachamara SEO na ndị njikwa iji bulie nke a. N'agbanyeghị nke ahụ, maka ndị ugbua n'okpuru mmemme onye nlekọta webmaster , Semalt nwere ihe ngwọta maka gị.
Site na nbudata faịlụ HTML na weebụsaịtị ha ma bulite ya na weebụsaịtị gị, Semalt nwere ike ịmatakwu data. I nwekwara ike ịhọrọ idenye HTML n’ime saịtị gị nke ọma. Ọ bụrụ na ịnwee ọgba aghara ọ bụla gbasara usoro a, nweere onwe gị ịgakwuru email na-akwado ndị ahịa ha . Ọ bụrụ na ịchọrọ ọwa ọzọ, ozi kọntaktị ha dị na ala ibe ọ bụla.
Ọzọkwa, bulite data ozugbo na Semalt na-ebelata ọnụ ọgụgụ ebe ị na-agbaso data gị. Tupu nke a, enwere ike ịnwe otu dashboard maka weebụsaịtị gị, otu kọlụm maka nchịkọta isiokwu, yana ọzọ maka data saịtị. Na Semalt, ihe niile dị na otu saịtị.
Ntụle ọsọ ọsọ na otu ọ nwere ike isi metụta SEO gị
Mgbe a bịara SEO, ikekwe ị naghị eche maka ọsọ ọsọ nke ibe gị nwere mmetụta ọ bụla dị ukwuu. Agbanyeghị, ọnụego ibe gị nwere mmetụta dị ukwuu na SEO.
Igodo ahụ dị n'okwu a "njikarịcha", saịtị kachasị mma bụ nke na-enweghị njikọ ndị gbajiri agbaji, loops na ngwa ngwa ngwa ngwa. Mgbe ndị otu Semalt nke ndị ọkachamara SEO nwere ike ịnweta weebụsaịtị, nyocha ha ga-ekpughe isi ihe ndị a agbajiri agba mbọ ma hụ na naanị ozi dị mkpa maka ndị ahịa.
N’iburu n’uche mbu ahu banyere ndi mmadu nwere odi 50-millisecond, o di nkpa inwe akwukwo nke di nfe. N’okpuru bụ dashboard ị ga-eji soro ọsọ gị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọmụmaatụ peeji nke anyị na - eji nke ọma. O nwere otu obere njehie ị nwere ike ịso, mana ndị ahụ nwere ike ịbụ ntụgharị maka ụfọdụ ahịa ịre ahịa. Agbanyeghị, dashboard a bụ akụkụ nke desktọọpụ. Ọ bụrụ na anyị lelee ụdị mkpanaka nke ibe weebụ a, ọ ga-ekpughe ihe dị iche.
Site na pasent 81 nke ndị America na- eji smartphones, ị ga-amata mkpa njikarịcha ekwentị. Ihe atụ dị n'elu na-agwa na weebụsaịtị a bụ nkezi n'etiti ndị na-asọmpi ya. Agbanyeghị, Semalt na-arụ ọrụ na-ewe gị karịa nkezi.
Kedu ka Semash ọhụrụ nke Semalt ga - esi nyere m aka ịbanye na Google dị elu?
Ọnụ ọgụgụ data ị na-eri kwa ụbọchị karịrị akarị. N'ihi nke a, ọ gaghị ekwe omume ịnagide mkpịrịchi ụbọchị. Mgbe ị jikọtara ọrụ gị oge niile dị ka onye nwe ya na ijikwa weebụsaịtị, ha abụọ ga-atọpụ ibe ha.
Usoro Semalt bụ ụzọ iji mee ka usoro nchịkwa saịtị dị mfe n'ụzọ ọ bụla ị nwere ike ịdọrọ uche gị laghachi ebe ọ dị mkpa ka ọ bụrụ: azụmahịa gị. Site na otu ndị ọkachamara raara onwe ha nye Semalt nwere obi ụtọ iduzi gị site na SEO, ị ga-ahụ onwe gị n'etiti elu Google.
Ihe dashboard bụ nsonaazụ Semalt nke ịmata ihe ndị ahịa chọrọ. Site na usoro dị mfe, anyị chọrọ ijide n'aka na ị bụghị naanị ịnweta mmelite oge niile na njikwa nke mkpọsa SEO gị, mana ị ghọtara ma ghọta uto nke mkpọsa ndị a na-ewetara azụmahịa gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere azụmahịa ma na-achọ itinye aka na okporo ụzọ, Semalt dị njikere ime ka ị gaa ebe ị nwere ike ịdọrọ okporo ụzọ, soro ndị ahịa na-azụ ma na-abawanye ahịa.